jeudi, 26 septembre 2019 08:20
Prezidansa: Voatendry ho Talen’ny kabinetra sivily Ranoromaro Lova Hasinirina
Voatendry, nandritra ny filankevitry ny minisitra ny 25 septambra 2019, ho Talen’ny kabinetra sivily eo anivon’ny Fiadidiana ny Repoblika Ranoromaro Lova Hasinirina. Izy no mandimby toerana an’i Delmotte Stéphanie.
mercredi, 25 septembre 2019 11:39
Firenena Mikambana: Nahemotra ny lahadinika mikasika ny « iles éparses »
Nahemotra ho amin’ny fivoriamben’ny Firenena Mikambana manaraka (faha-75) ny lahadinika mikasika ireo Nosy Malagasy (iles éparses) giazan’ny Frantsay.
Tahirin-tsary MAHTP fampihaingoana
Raha ny fanazavan-dRanarivelo Fanomezantsoa Lucien, Minisitry ny Fambolena, ny Fiompiana sy ny Jono, dia honerana vola na soloina ny tanin’ireo tantsaha voakasiky ny tetikasa fanorenana tanàna vaovao eny Ambohitrimanjaka, Distrika Ambohidratrimo. Tanimbary manana velarana 100ha no hototofana hanatanterahana io tetikasa « TANAMASOANDRO », vinan’ny filoha Andry Rajoelina io.
lundi, 23 septembre 2019 10:25
Fifidianana Kaominaly: Vita ny an-tsapaka ho an’Antananarivo Renivohitra
Tontosa teny Nanisana ny marainan’ity alatsinainy 23 septambra 2019 ity ny fisarihana nandaharana ireo kandida ao anaty bileta tokana amin’ny fifidianana Ben’ny tanàna sy ho an’ny fifidianana Mpanolontsain’ny tanàna, izay hatao amin’ny 27 novambra 2019.